Shan xeeladood oo Gmailka loogu qaabeeyo Android | Androidsis
Eder Ferreno | | Codsiyada Android, Habee Android, Khiyaamada Android, Tababarada
Qeyb weyn oo ka mid ah dadka isticmaala taleefanka Android, waxay ku isticmaalaan Gmail taleefankooda. Gaar ahaan hadda oo Inbox uu albaabada u laabayo, adeegga Google-na biil loogu soo dirayo sida mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican. Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee aan haysanno marka aan adeegsaneyno codsigan ayaa ah inay na siineyso fursado badan oo habeyn ah.
Sidaa darteed, hoosta waxaan ku tusaynaa tabaha ugu fiican ee lagu qaabeeyo Gmail taleefankaaga Android. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad wax badan ka hesho dalabka emaylka. Marka lagu daro sameysashadiisa si aad u raaxo badan, maxaa yeelay si fiican ayey adiga kugula qabaneysaa, mahadsanid howlaha sida tirtirida boostada.
1 Nooca sanduuqa
2 Wadahadal Muuqaal
4 Soo degso sawir otomaatig ah
5 Lifaaqa otomaatiga ah ee lifaaqyada
Ugu talagal, Gmail badanaa had iyo jeer waxay soo bandhigtaa isla sanduuqa sanduuqa oo kale. In kasta oo xaqiiqda jirta, waxaan haysannaa suurtagalnimada inaan ku xulanno xulashooyin kale kiiskan. Maaddaama haddii aad rabto, aad wax ka beddeli karto nooca sanduuqa ku jira barnaamijka. Marka waxaan dooran karnaa bandhig kale, oo nooga raaxeysan kara adeegsiga barnaamijka.
Sidaa darteed, Waxaan tagnaa liiska barnaamijka kadibna waxaan galnaa dejinta. Markii aan gujino cinwaanka koontada, markaa waxaan helnaa suurtagalnimada in wax laga beddelo nooca sanduuqa. Dooro midka adiga kugu habboon.
Markii aan isweydaarsano emayl isla qof, Gmail badanaa waxay isugu dirtaa fariimahan wada hadal, halkii aad iyaga si gooni gooni ah ugu wada muujin lahayd. In kasta oo ay jiri karaan adeegsadayaal doonaya inay si gooni ah loo daawado. Waan ka saari karnaa aragtidan wada sheekaysiga barnaamijka dhib la'aan.
Waxaan tagnaa goobaha barnaamijka, qeybta guud ee goobaha waxaan ka helnaa qeybta aragtida wada hadalka. Waxaa ku xiga sawir, oo ah waxaan si fudud u baari doonnaa. Tani waxay ka saareysaa aragtida wada hadalka si fudud. In kastoo ay ka duwanaan doonto wadahadal qarsoodi ah.
Waxaan aragnay sida ay tilmaammadu uga dhex muuqdaan nidaamka qalliinka, iyo waliba codsiyada. Waxaan ka faa'iideysan karnaa tilmaamaha qaarkood, sida inaad u xoqdo fartaada si aad u fuliso ficilada qaarkood. Waxaan udhaqaaqi karnaa dhanka midig ama dhanka bidix, qaabkanna waxaan ku fulin karnaa ficil.
Tani waa wax in waxaan ku habeyn karnaa goobaha guud ee Gmail. Halkaas, waxaan ka helnaa qayb la yiraahdo ficillo markii far la jiidayo, iyo marka aan soo galeyno waxaan ku habeyn karnaa tilmaanta midigta iyo mid bidixda ah. Tilmaamahan, waxaan ku fulin karnaa ficil, oo annaga lafteenna aan awoodno inaan soo xulno.
Soo degso sawir otomaatig ah
Haddii ay noo soo diraan emayl leh sawirro kala duwan, marwalba waxaan haysannaa suurtagalnimada in laga takhaluso soo dejinta otomaatigga ah, taas oo xaaladdan ay tahay xaqiiqda ah toos u muuji boostada. Gmail wuxuu na siinayaa suurtagalnimada inaan wax ka beddelno tan, sidaa darteed barnaamijka ayaa na weydiin doona kahor muujinta sawir. Sidaa darteed, waxaan nahay kuwa go'aanka gaaraya.
Gudaha nidaamka dalabka boostada ayaan Waxaan helnaa qayb la yiraahdo Sawirro. Waa halkaas meesha aan ku haysanno suurtagalnimada in barnaamijku had iyo jeer na weydiiyo kahor muujinta sawir.
Lifaaqa otomaatiga ah ee lifaaqyada
Sida sawirada oo kale, waxaan ku sameyn karnaa isla lifaaqyada. In sidan, lifaaqa waxaa la soo dejinayaa oo keliya markii la weydiiyo, sababtoo ah waxaan ka codsanay habkaas. Tallaabooyinka ay tahay inaan raacno kiiskan waxay la mid yihiin kuwii aan ku qaadnay qaybtii hore.
Gudaha goobaha Gmail, Waxaan aadeynaa qeybta isticmaalka xogta. Dhexdeeda waxaan ka helaynaa qeyb lagu magacaabo soo lifaaqyada soo dejinta, taas oo ay u badan tahay in horeyba loogu calaamadeeyay hab-dhaqan ahaan. Waxa ay tahay inaan sameyno kiiskan ayaa ah inaan hubinno doorashadan. Marka si otomaatig ah looma soo degsado markaan adeegsanno barnaamijka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Khiyaamada ugufiican ee Gmail loogu hagaajiyo Android
Amazon Alexa Vs Google Assistant, duel of caawiyeyaasha on Android
Sida loo demiyo gelitaanka otomaatiga ah ee Google Chrome